अबको केही महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ « News24 : Premium News Channel
विराटनगर । प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले अबको केही महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिने बताएका छन् । विराटनगरमा आयोजना गरिएको नेपाली कांग्रेसको प्रदेश १ पार्टी अधिवेशनलाई भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्दै सभापति देउबाले अब केही महिनामा नै स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिने बताएका हुन् ।
साथै अबको एक वर्षभित्र संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुने भएकाले तयारीमा जुट्न कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । उनले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा मात्र मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव भएकाले पार्टीलाई सशक्त र एकजुट बनाएर लैजानुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
केन्द्रीय सदस्य कृष्ण सिटौलाको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पद्धतिको लागि आन्दोलन गर्नु नपरोस् भन्दै भाषणले मात्र मुुलुुकको विकास नहुने भएकाले संविधानको रक्षा गर्दै नेपाली कांग्रेसको झण्डा मुनी बसेर देशलाई एकताको बाटो साथै उन्नति र प्रजातान्त्रिक बाटोमा लैजानुपर्ने बताए ।
त्यस्तै रक्षामन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले पार्टीभित्र अहिलेसम्म भएका र अधिवेशनमा देखिएको असमजदारीलाई पार्टीमा एकबद्धता बनाएर लैजानु चुनौती भएको बताए । उनले केन्द्रीय महाधिवेशन नजिकिएसँगै विचार नीति र कार्यक्रमको छलफल गरेर जानुपर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजय गच्छेदारले नेपाली कांग्रेसका सबै नेता उत्तिकै महान भएको विचार राख्दै नेपाली कांग्रेस एक भएर जानुपर्ने र आफू काग्रेस बनाउन आएको विचार राखे । केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले आगामी हुने केन्द्रीय महाधिवेशनमा पार्टी बचाउनको लागि कसैको दवावमा नपरी नेता चैन गर्न कार्यक्रर्ता संग आग्रह गरे ।
सो उद्घाटन कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य सुजता कोइराला, डिला संग्रौलालगायतका नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ समितिका लागि शुक्रबार मनोनयन र शनिवार निर्वाचन हुने कार्यक्रम रहेको छ ।